I-china BEUFILLER umnqamlezo onxulumene neHyaluronic Acid Dermal Filler Gels mveliso kunye nabenzi | IiBululines
Iifilitha zedermal, ezikwabizwa ngokuba kukugcwalisa ubuso, ukufinya imibimbi okanye ukufayiliza izithambiso, ziinkqubo ezithandwayo ezincinci ezingenabungozi ezisetyenziselwa ukwenza ubuso, ukugcwalisa imibimbi kunye nokongeza ivolumu. iigcwalisi, izinzeli zesilevu, ukufakela umgca wokuncuma, ukuhleka kwemigca yokugcwalisa, kunye nokuzalisa iimpundu, ukuzalisa amabele.
I-BEUFILLER luthotho lokugcwalisa i-dermal edityaniswe ne-hyaluronic acid enqamlezayo evela kwijeli ye-HA engeyiyo yezilwanyana. Ijeli icacile, ayinambala kwaye iyabola. Kukhuselekile kwaye kuyasebenza ekunyangeni ubuso bonke budala ubuhle kwaye ujonge ulutsha.
Indawo yokuSebenza kunye nokuSebenza:
I-BEUFILLER dermal filler iquka iimodeli ezi-3, ziyiDerm, iDerm Deep, iDerm Plus. Iindidi ezahlukeneyo zokugcwaliswa kwesikhumba kuyilelwe ukunyanga iimpawu ezahlukileyo zokwaluphala.
Iintshukumo ze-BEUFILLER dermal filler
Izinto 1.Top ekrwada
Umgangatho ophezulu we-asidi ye-hyaluronic, imvelaphi engeyiyo yezilwanyana, i-100% yokubola, akukho vavanyo lolusu olufunekayo, akukho kukhatywa.
Amawakawaka eziphumo zovavanyo lweklinikhi abonisa isiphumo sesona sendalo kwaye ihlala ixesha elide xa ingama-24mg / ml.
Iinaliti ezimbini ze-27g / 30g ezivela kwinkampani ye-BD zibonelelwa simahla. (1ml / 2ml)
Inaliti ityhubhu yenziwe ngonyango lweglasi yeglasi.I-tube ephumeleleyo kunye nokubonakala okuphezulu kunye nokunyanzeliswa okungqongqo, kulula ukusebenza.
5. Isirinji plunger
Isirinji plunger, inaliti hub, inaliti ikepusi yenziwa ngebanga lezonyango izinto zePP ngokungqinelana ne-USP yeKlasi yesine kunye nemigaqo ye-ISO.
Ukwahlula okwahlukileyo, kuqinisekisa ngokupheleleyo imveliso ngaphandle kongcoliseko.
Imfuneko yokusebenza: 1. Yamkela kuphela ugqirha oyingcali kumaziko onyango amkelwe ngokusesikweni ngurhulumente.
2 .Abahlukeneyo basebenzise into eyahlukileyo.
3. Ngokuhambelana ngokungqongqo neemfuno zokucaciswa kwemveliso.
Phambi konyango I-1.Guest akufuneki icwangcise nayiphi na inkqubo engenayo, unyango lwezithambiso nge-laser, i-ultrasound, i-peels, i-facials okanye i-micro-dermabrasion kwiiveki ezi-2 ngaphambi okanye emva konyango kunye neBeufiller.
Kucetyiswa ukuba kuyekwe ukusetyenziswa kwe-Aspirin, Motrin, Gingko Biloba, Garlic okanye naziphi na ezinye ii-acid ezinamafutha ubuncinci kwiintsuku ezi-3 ukuya kwiveki enye ngaphambi nasemva konyango ukunciphisa ukutyumka okanye ukopha.
3.Thintela utywala, icaffeine, isongezo seNiacin, ukutya okunesodiyam ephezulu, ukutya okuneswekile eninzi, iikhabhohayidrethi ezisulungekileyo, ukutya okunezipayisi kunye neecuba 24-48 iiyure ngaphambi nasemva konyango lwakho. Ezi zinto zinokubangela ukwanda kokudumba okanye ukucaphuka.
Emva konyango 1.Ungayichukumisi, uyichukumise, ucofe, uyihlikihle okanye uyiqhathe indawo efakwe iiyure ezi-6 emva konyango.
2.Khusela umthambo onamandla, ilanga kunye nobushushu beentsuku ezi-3 emva konyango.
3. Kuphephe ukuntywilisela intloko phantsi kwamanzi iiyure ezingama-24 ezipheleleyo; Oku kubandakanya amachibi, ulwandle, ibhafu, ibhafu eshushu, njl.
Imbali yeminyaka eyi-1.20, i-GMP Workshop
Umzi-mveliso wethu uneminyaka engama-20 ukhangela imveliso kwi-hyaluronic acid dermal filler, kwaye unamava angaphezulu kweminyaka eli-10 kwi-oem.we sinesebe loyilo lobuchwephesha ukukunceda wenze uphawu lwakho, ukupakisha kwakho, ukwenza umbono wakho ukuphucula ifuthe lakho lophawu!
Iworkshop yeklasi ye-10,000 yezixhobo zonyango zeklasi III, sazisa iteknoloji yokubulala inzala kunye nenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, eqinisekisa ukhuseleko kunye nomgangatho ophezulu weemveliso ngaphandle kongcoliseko. Wamkelekile ukusityelela!
Q: Ndingayifumana isampulu?
A: Ewe, kunjalo, isampuli iyafumaneka, ngesiqhelo siya kubiza iindleko zesiseko semveliso kunye neendleko zokuhambisa.Kwaye ezinye iintlobo, iSampuli isimahla, kufuneka uhlawule iindleko zokuhanjiswa!
Umbuzo: Ukuba ndiya-odola isixa esikhulu, ngaba unika isaphulelo sexabiso?
A: Ewe, siya kukunika isaphulelo ngokusekwe kubungakanani bakho, ngakumbi uku-oda kwakho, amaxabiso asezantsi.
Umbuzo: Ngaba unayo enye ipakethe? Kuba andiyithandi iphakheji oyinikelayo ngoku.
A: Ewe, singumzi-mveliso we-OEM, singamkela isiko.Siza kwazisa abanye kuwe kuqala.Ungathumela nemifanekiso yephakheji oyithandayo kuthi, siya kuyitshintsha iphakheji njengesicelo sakho.
A: Umzi-mveliso wethu unembali yeminyaka engama-20 sinenkqubo yolawulo lomgangatho ngokungqongqo kwinkqubo yethu yemveliso.Ukuthengwa kwemveliso eluhlaza kunye nolawulo lomgangatho kulandelwa ngokungqongqo inkqubo yolawulo ye-ISO 13485. Ngaphandle koko, izixhobo ezigcweleyo zokufumanisa kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho we-GMP ukubonelela ngesiqinisekiso esomeleleyo semveliso ekumgangatho ophezulu.
Q: njani malunga nenkonzo emva-kwentengiso?
A: SineSebe lokuthengisa lenkonzo yabathengi! Ukuba ufuna ukuba nayiphi na ingxaki malunga nomyalelo, unganxibelelana ngokulula noWhatsapp, i-imeyile, uSkype okanye umnxeba nanini na!
Egqithileyo I-BEUFILLER hyaluronic acid Lip yokugcwalisa
Esona sihlomelo seDermal siGqibeleleyo
Esona sihlomelo seDermal siGqibeleleyo seJawline
Esona sihlomelo seDermal sihle kakhulu kumkhombe wokukrazula
Esona sihlomelo soMdaka siPhantsi kwamehlo